ပုံနှိပ်ဆားကစ်, printed wiring, printed board, printed circuit board (PCB), printed wiring board(PWB), rigid printed board, Ten layer board, rigid 10 layer printed board. Gold finger, ဘီဗဲလ် / Cham - တရု�ပုံနှိပ်ဝါယာကြိုး��ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့��ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်tePCBiriပုံနှိပ်ဝါယာကြိုးဘုတ်အဖွဲ့rPWBed တင်းကျပ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့, ဆယ်ပါးအလွှာဘုတ်အဖွဲ့boတောင့်တင်းသောWB),အလွှာပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့d,ရွှေလက်ချောင်းboard, rigid 10 layer printed board. Gold finger, ဘီဗဲလ် / Cham ပေးသွင်း,စက်ရုံ -WMD
10 အလွှာ FR4 TG170 / HIGH သည့် TEMP
10 အလွှာ multilayer ဘုတ်အဖွဲ့
အဝတ်အချည်းစည်းဘုတ်အဖွဲ့, ရှင်းလင်းသောဘုတ်အဖွဲ့, တစ်ခုတည်းအရွယ်အစား 80 * 140MM, လူပျိုအဖြစ်သင်္ဘော, 1.2မီလီမီတာ - 35အွမ် - 10 ယင်းအပေါက်အတွင်းပိုင်းကြေးနီ -1mil အလွှာ, ul မှတ်သားခြင်းနှင့်အတည်ပြု, အလွှာရေတွက်ဖြစ်ပါသည် 8, IPC CLASS 2, အားလုံး soldermask ဆည်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ရပါမည်. ရွှေလက်ချောင်းများ 30u” အားလုံးကိုရွှေလက်ချောင်းများအပေါ်လိုအပ်သောရွှေကို. 45 လက်ချောင်းအပေါ်လိုအပ်သောဒီဂရီဘီဗဲလ်. ဒါဟာရှိပါတယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ 1 ယင်းအပေါက်အတွင်းပိုင်း Mil များတွင်လည်းကောင်း. soldermask နှင့်အတူပလပ်ပေါက်မှတဆင့် BGA. နည်းပညာဆိုင်ရာ features တွေ 30u နှင့်အတူ multilayer ဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်” ကိုရွှေလက်ချောင်းများ. လျင်မြန်စွာအလှည့်ရှေ့ပြေးပုံစံ, တစ်ချိန်ကစမ်းသပ်ပြီး, မြင့်မားသော Volume ကိုထုတ်လုပ်မှုလက်ခံသည်. ဒါဟာအဓိကအား converter ကိုအသုံးပြုသည်. DHL နေဖြင့်ဖြန့်ဝေဖော်ပြ, ယူပီအက်စ်, Fedex, TNT သို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမဆိုသတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်း, ပင်ပင်လယ်နားမှာက. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကအသိအမှတ်ပြုထားပါသည်, မည်သည့်လိုအပ်ချက်များကိုပါလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.
double-တဖက်သတ် PCBs ရှေ့ပြေးပုံစံ & အသေးစားစီးရီး, Big အသုတ်လိုက်ထည် PCB ထုတ်လုပ်သူ